Posted by PhyoPhyo at Tuesday, June 28, 2011 Labels: ဖိုးပလံ နှင့် ထူးထွေဆန်းရာ သည်ကမ္ဘာ
“ဖိုးပလံ နင်ဒီကျောင်းပိတ်ရက် သိပ်ငြိမ်တာပဲ ငါ့ဆီတောင် ရောက်မလာဘူး” ခခ က အသံစူးစူးနဲ့အော်လိုက်တယ်။
မော်စီကလည်း “အင်းလေ၊ ငါ့ဆီလည်းမလာပါဘူး” ၀င်အော်တယ်။
“နင်တို့ ငါပြောရင်လည်း ယုံမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မပြောတော့ပါဘူးလေ၊ ဟဲဟဲ၊ သိလား ငါရွှေသော့ရခဲ့တယ်။ ရွှေသော့နဲ့ဖွင့်တဲ့နေရာလည်းရောက်ခဲ့တာပဲ”
“ဟင် မပြောတော့ဘူး ဆိုပြီး ဆက်ပြောတယ်။ မနားတမ်းပြောမယ့် သဘောရှိတယ်။ မော်စီရေ ငါတို့ ကစားကွင်းသွားရအောင်၊ ပင်ပေါင်သွားရိုက်ရအောင်၊ လာ လာ၊ အခုပဲ သွားစို့၊ မြန်လေကောင်းလေပဲ” ခခ က မျက်စောင်းထိုးပြီး ပြောပါတယ်။
ခခ ကတော့ တကယ်ပဲ ညစ်ပြီ။
“ဟီး ဟီး၊ ရယ်ရတယ်၊ ဖိုးပလံရော ခခရော ငပေါကြီးတွေ” မော်စီက အသားလွတ်ကြီး ၀င်နှိပ်ပါတယ်။
“ပြောပါရစေဟာ၊ ငါ့ရဲ့ ရွှေသော့စွန့်စားခန်းအကြောင်း၊ ငါသိပ်လိုချင်တဲ့ ရွှေသော့ရလာတဲ့အခါ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘာမှတော့မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ငါကျေနပ်သွားတယ်ဟ၊ ငါ လိုချင်တပ်မက်စိတ်တွေများ၊ လောဘနောက်ဇွဲသန်သန်နဲ့လိုက်ရင်း နောက်ဆုံးတော့ ဒီလမ်းကိုပဲသွားရတာဆိုတာ ငါ့ကို စိတ်နယ်လွန်တန်ခိုးရှင်တစ်ဦးကပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ အဘိုးရေမွန်များလားပဲ”
မော်စီက မျက်မှောင်အစွမ်းကုန်ကျုံရင်း “အမလေး၊ လုပ်ပြန်ပြီ၊ စကားလုံးတွေကကြီးကျယ်လိုက်တာ၊ အဘိုးရေမွန်ဆိုတာ ဟို မှော်ဆရာဖြူကြီးကို ပြောတာလား” လို့ ပြန်မေးပါတယ်။
“ဒါက ဒီလိုရှိတယ်၊ ရွှေသော့ရတော့ ရတယ်၊ မရတော့မရဘူး၊ ငါ တွေ့တာက အိမ်မက်ထဲမှာလို တကယ်လိုလို၊ ငါ သောကြာနေ့ညကနေ အိပ်လိုက်တာ၊ နောက်တစ်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းကျော်တဲ့အထိ မထလို့၊ မေမေကတောင်ဆူတယ်၊ ကာတွန်းစာအုပ်တွေလည်း ဘေးမှာတွေ့တော့ တညလုံးမအိပ်ပဲ ကာတွန်းတွေဖတ်တယ်ထင်နေတာ၊ တကယ်က ငါ ကာတွန်းဖတ်တာအစလေးပဲရှိဦးမယ်၊ ပြီးတော့ ကာတွန်းထဲငါရောက်သွားတယ်၊ တီထွင်ပါရဂူဖိုးဆိတ်ဖြူကာတွန်းလေ၊ ဖိုးဆိတ်ဖြူက အဘိုးရေမွန်ဖြစ်သွားရော၊ ပြီးတော့ လေ .. x....X....x... X..*...x * X ... x ..အရိပ်တွေက ဟောဒီလို ... X ...x ... ငါးအကျင့်ပုတ်က ဒီလိုပုံ .. x ...X ” အမူအရာမျိုးစုံလုပ်ပြီး သူတို့ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Saturday, June 25, 2011 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
ညက မေမေ့ကို အိပ်မက် မက်တယ်။ :(
၆. မေမေ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ အားလုံးစုံလင်စွာ (အပိုင်း ၂)
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, June 21, 2011 Labels: ဖိုးပလံ နှင့် ထူးထွေဆန်းရာ သည်ကမ္ဘာ
မနေ့က... ညကတည်းက ချက်စရာပြုတ်စရာတွေအတွက် မေမေ့ကို ကူညီပေးပါတယ်။ ခခ နဲ့ မော်စီလည်း တချိန်လုံး ကူညီပေးကြတယ်။ ခခ က သူ့မေမေ သင်ပေးထားတော့ မီးဖိုးချောင်ကိစ္စတွေသိနေခဲ့ပါပြီ။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အဲဒီမိန်းကလေး ခခက သိပ်ဆရာလုပ်တာပဲ၊ ခခ ခိုင်းတဲံ့အတိုင်းပဲ ဖိုးပလံနဲ့ မော်စီက ကူညီပြင်ဆင်ပေးနေခဲ့ရတာ။
မနက်စောစော မေမေ့ပါးကို အားပါးတရမွှေးလိုက်ပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။
“မေမေ ရေ ..ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့ပါဗျ၊ မေမေ့ကို အထူးမွေးနေ့လက်ဆောင် ဒီနေ့ ပေးမယ်။ မေမေမှတ်မိလား၊ မေမေ့ကို ရွှေပန်းအိုးလေးပေးမယ်ဆိုတာ၊ နတ်သမီးနယ်မြေက သားတို့ လက်ဆောင်ရလာကြတာလေ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးဖိုးပလံကို အခုလိုပဲ မုန့်တွေများများကျွေး၊ မုန့်ဘိုးများများပေး၊ များများစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေခင်ဗျား”
“ဟုတ်ပါပြီရှင်၊ သားလေး ဖိုးပလံပေးတဲ့ရွှေပန်းအိုးလေး မေမေ လိုချင်လှချည်ရဲ့၊ ခုပဲ မြန်မြန်ပေးပါတော့” လို့ မေမေက ပြုံးရွှင်စွာပြောပါတယ်။
ဖေဖေကလည်း “မေထားရေ မင်္ဂလာရှိတဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေဗျား” လို့ ဆိုတယ်။ “အသက်ဘယ်လောက်ပြည့်လည်းတော့ မမေးတော့ပါဘူးကွာ နော့” လို့လည်း စနောက်လိုက်သေးတယ်။
၆. မေမေ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ အားလုံးစုံလင်စွာ (အပိုင်း ၁)
Posted by PhyoPhyo at Monday, June 20, 2011 Labels: ဖိုးပလံ နှင့် ထူးထွေဆန်းရာ သည်ကမ္ဘာ
ဖိုးပလံလည်း ရွှေပန်းအိုးလေးကို မေမေ မသိအောင် သိမ်းဖွက်ထာရမယ့် နေရာစဉ်းစားရပါတော့တယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဖိုးပလံအခန်းထဲမှာပဲ ထည့်ထားလိုက်တာ၊ မေမေက လျှော်စရာအ၀တ်အစားတွေ ဖိုးပလံတခန်းလုံး နေရာလပ်မကျန်အောင် ရှာဖွေပြီးယူတတ်တာဆိုတော့ ဖိုးပလံ အခန်းထဲပဲထားရင် သိပ်မကြာဘူး မေမေ မြန်မြန်ပဲ သိသွားမှာပဲ။ ဖိုးပလံ စိတ်ကူးရလိုက်တာက စတိုခန်းထဲ ထည့်သိမ်းထားဖို့ပါ။ ဒါနဲ့ပဲ စတိုခန်းသော့ကိုယူပြီး ဖေဖေမသိအောင် တိတ်တိတ်လေး ထွက်ခဲ့တယ်။ ဖိုးပလံတို့ စတိုခန်းက အိမ်မကြီးနဲ့ တခြားစီ၊ နည်းနည်းလေးလှမ်းတယ်၊ သိပ်အဝေးကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ စတိုခန်းထဲရောက် အခန်းပတ်လည် ဖိုးပလံစူးစမ်းတယ်၊ နေရာလွတ်ကလည်း မကျန်လှအောင် ပစ္စည်းပစ္စယတွေကလည်း ပြည့်နှက်နေတာပဲ၊ သစ်သားဖြတ်စအကြီးအသေး၊ အတိုအရှည်တွေကလည်း အများကြီးနဲ့၊ ဘီရိုပိစိကွေးလေးတွေလည်းရှိတယ်။ ငှက်လှောင်အိမ်ကြီးကြီးတစ်ခုလည်းတွေ့ရဲ့၊ ပန်းအိုးအလွတ်တွေရော၊ ဖိုးပလံငယ်ငယ်ကစီးခဲ့တဲ့ စက်ဘီးနီနီလေးရော ပြည့်နေတာပဲ။ ဖိုးပလံ ရွှေပန်းအိုးလေးကို ဘယ်မှာထားရပါ့မလဲ။
Posted by PhyoPhyo at Saturday, June 18, 2011 Labels: ဟိုဟို ဒီဒီ
Ja imam talenat(I have talent)- Đurađ Đuričić
ဆားဘီးယန်းဗားရှင်း Talent show ပါ။
ဒီကလေးမျိုးတစ်ယောက်လောက်ရှိထားရင် အဖေ အမေတော့ ပျင်းနေရမှာကိုမဟုတ်တော့ဘူး။
ဂျုးရက်ဂ်ျဂျူးရီချစ်ခ်ျလေးက တီးနေရင်း ပါးစပ်လေးဟောင်းလောင်းနဲ့ ချစ်စရာလေး။
Posted by PhyoPhyo at Friday, June 10, 2011 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး, ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ပရဟိတပစ်မှတ်
မိုက်ကရိုဆောဖ့်တည်ထောင်သူ ဘီလ်ဂိတ်ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့တိုင်းပြည်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာရုန်းကန်နေရတဲ့ အာဖရိကန်လယ်သမားတွေရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အထောက်အပံ့ပေးဖို့အတွက် ခြေဦးလှည့်လိုက်ပါပြီ။ ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံး အလှူအတန်းရက်ရောသူ ဘီလ်ဂိတ်က သူ့ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းက ဘာကြောင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေဆီ ဦးတည်လိုက်တာလည်းဆိုတာကို အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေဆီချည်းကပ်မှုမှာ အထူးပြုပြင်ထားတဲ့မျိုးစေ့၊ စိုက်ပျိုးနည်းသတင်းအချက်အလက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးဝေရေး စတဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့အကူအညီမျိုးကို အပင်စိုက်ပျိုးသူတွေဆီအရောက်ပို့တဲ့ အစီအစဉ်တွေပါဝင်တယ်။ အငြင်းပွားနေကြဆဲ မျိုးဗီဇပြုပြင်ထားတဲ့မျိုးစေ့(GM)တွေဟာ တချို့အခြေအနေတွေမှာ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းအဖြစ် အသုံးဝင်တာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ မျိုးဗီဇပြုပြင်မထားတဲ့မျိုးစေ့(non-GM)တွေကို အများအားဖြင့်အသုံးပြုတယ်လို့ လည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း လက်ရှိ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အထူးတလည်တိုးတက်မှုမရှိတဲ့ မြေနေရာတွေမှာ လယ်သမားတွေမှီဝဲစားသုံးရတဲ့ အစားအစာတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေမှုက အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအသစ်တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀ အတွင်း တကမ္ဘာလုံးမှာ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်မှုဟာ ၁၄၅ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြင့်လာခဲ့ပေမဲ့ အာဖရိကဒေသရဲ့ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်မှုကတော့ ၁၉၆၀ ခုနှစ်ကတည်းက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ ဟားဗာဒ့်တက္ကသိုလ်ပရော်ဖက်ဆာ ဆာလက်စ်တာစ့်ဂျူးမာ ရေးသားထားတဲ့ “ကောက်သစ်ရိတ်ချိန်” စာအုပ်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Saturday, June 04, 2011 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
♫ ငယ်ငယ်တုန်းထဲက တော်တော်ကြားဖူးတာ ...
ပုံပြင်ဟောင်းတစ်ခုမှာ ♫ ကိုရွှေကျားကြီးဟာ ရွှေယုန်လေးအပြောမှာ တော်တော်လေး မျောပါ ♫